Fanaraha-maso sy fanombanana | Reef Resilience
Ny drafitra fanaraha-maso dia hitarika ny fisafidianana ireo tondro ary hanome ny antony hametrahana ny tokonam-baravarana sy ny fikafika.
Ny fanaraha-maso sy ny fanombanana dia fitaovana manan-danja ho an'ny fitantanana mahomby ary afaka manome fampahalalana mba hahitana ny fanovana eo amin'ny toe-javatra izay mety mitarika ny valin'ny fitantanana, mamaritra ny anton'ny fiovan'ny ahiahy, ary manombana ny fahombiazan'ny hetsika fitantanana.
Ny fanaraha-maso dia mitaky famerimberenana fandrefesana isaky ny mandeha ny fotoana, mazàna tanjona hamaritana fiovana, toy ny fironana amin'ny firakotra haran-dranomasina na haben'ny trondro (oh: ny herbivores). Ny fanombanana dia manondro fandrefesana indray mandeha ny variables mifandraika amin'ny toe-piainana ara-tontolo iainana na ara-tsosialy na fanerena. Ohatra, ny fandinihana indray mandeha ny haran-dranomasina simba noho ny fiorenan'ny sambo dia heverina ho tombana, fa ny fandalinana ireo velaran-dranomasina iray isan-taona mampiasa fomba mitovy amin'izany dia ny fanaraha-maso. Ny fanombanana ny faharetana dia ohatra iray izay matetika ampiasain'ny mpitantana ny haran-dranomasina mba hanombanana ny faharetan'ny tranokala samihafa.
Ity fizarana ity dia manome topimaso momba ny famolavolana programa fanaraha-maso ny haran-dranomasina samihafa sy ny fanombanana ny fanombanana ny haran-dranomasina. Raha mila fampahalalana lalina kokoa dia raiso ny Coral Reef Resilience Online Courses. Vakio ny famaritana ny Mazava ho azy or misokatra amin'ny varavarankely vaovaomisoratra anarana amin'ny Mazava ho azy.
Ny vatohara fanaraha-maso diver any Florida Keys. Sary © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank